इमेज साप्ताहिक : 2022-04-24
काम हुन छाड्यो गल्छी–रसुवागढी सडकमा, ठेकेदारले माग्यो क्षतिपुर्ति
विदुर । नुवाकोट रसुवाको मात्रै नभएर देशकै रूपान्तरणकारी योजना गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी– रसुवागढी सडक योजनाको पाँच वर्षमा निर्माण प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।
यो आयोजनाको प्रगिति बिवरण न्युन देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ मा निर्माण थालिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पनी पुग्न सकेको छैन् । आयोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा पाँच वर्षको कुल भौतिक प्रगति ४९ पतिशत पुगेको छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बिशुद्ध नेपाल सरकारको बजेटमा धादिङको पृथ्वी राजमार्गको गल्छीदेखि नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै रसुवाको बेत्रावतीबाट मैलुङ स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी (चिनियाँ सिमानासम्म) जोड्ने ८२ किलोमिटर सडकको त्यसबेलामा निर्माण सुरु भएको थियो ।
भारतीय नाकाबन्दीको उपज यो सडक योजना निर्माणमा ओलीले तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक नीति, निर्देशन दिएर बजेटको सनिश्चितता गरेर प्राथमिकतामा राखेका थिए । ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै यो सडक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा निर्माणकार्य कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
भारतीय परनिर्भरता कम गर्न निर्माण सुरु गरेको योजनाको काम सन्तोषजनक ढङ्गले नहँदा स्थानीय उपभोक्ता चिन्तित देखिएका छन् ।
आयोजनाको गल्छी–मैलङ खण्डको विदुर नगरपालिकाका पिपल्टार गेटदेखि ढुङ्गेसम्म र रसुवाका बेत्रावती पुलदेखि नयाँपुलसम्म मुआब्जा विवादको कारण सर्वोच्च अदालतले स्टेअर्डर समेत जारी गरेको छ । यो दई क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न पाएको छैन । गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ ४६ किलोमिटरको ठेक्का लिएको कोभेक तुन्दी जेभीले पटक–पटकको स्थानीय अवरोध, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीबीच पनि निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिएको कारण उसले लिएको जिम्मेवारीको ८० प्रतिशत निर्माण यसै महिना भित्र सम्पन्न गर्दै छ ।
अदालतको स्टेअर्डर जारी भएको कारण ठेकेदार कम्पनीले पीपलटार गेटदेखि ढुङ्गे र बेत्रावती पुलदेखि नयाँपुलसम्म काम गर्न पाएको छैन । सदरमकाम क्षेत्रमा विगत दुई बर्ष देखि कुनै काम गर्न नपाएपछी ठेकेदार कम्पनीले आयोजनासँग क्षतिपुर्ति मागेको छ ।
यता, मुअब्जाको माग गर्दे आन्दोलित स्थानिय नागरिकहरू पनि अदालतले छिटो फैसला गर्दिए हुन्थ्यो भनेर बस्न थालेका छन् । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चार लेनमा निर्माण हुनुपर्ने भएपनि गङगटेदेखि ढुङ्गे सम्म मुअब्जा बिबादका कारण हाल डेडिकेट डबल लेनको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर भए पनि आयोजनाको म्यादभित्र निर्माण गर्न स्थानीयहरूले समेत छलफल चलाएका छन् । ठेकेदार कम्पनी कोभेक तुण्डीले वैशाखभित्र ठेक्काको ८० प्रतिबत निर्माण प्रगति सम्पन्न गरेर जाने तयारी गरे पछी स्थानीयहरूले हाल छाडिएको क्षेत्रमा पिच र नाली निर्माण गर्न आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गर्न थालेका छन् ।
आयोजना कार्यालयले समन्वय गर्न नसक्दा सदरमुकाम विदुरको सडक अलपत्र परेको छ । आयोजना अन्तर्गत कोभेक–तन्दीले गल्छीदेखि मैलुङ ४६ किलोमिटर, भारत सिद्धिशाही जेभीले मैलङ–स्याफ्रबेँसी १९ किलोमिटर र चिनियाँ वित्त सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटरको जिम्मा पाएको छ । मैलुङ–स्याफ्रुबेँसीखण्डको जिम्मा लिएको ठेकेदार भारत सिद्धिशाही बिगत ७ महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएको छ ।
चिनियाँ पक्षले जिम्मा लिएको खण्डमा सम्झौता भएको तीन वर्षदेखि काम सरु हुन सकेको छैन् ।
झण्डै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो सडकलाई गल्छी मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरि भारत–चीन त्रिदेशीय पारवहनमार्गका रूपमा तयारी रहेको सडक विभागले बताएको छ ।
इमेज साप्ताहिक image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, April 24, 2022 No comments:
विदुर । १८ चैत, २०७८ बाट नुवाकोटमा सुरु भएको सत्ता गठबन्धन दलको स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने उत्साहपूर्ण छलफल र बैठक ९ बैशाख, २०७९ अर्थात् २२ दिनपछि निराशामा परिणत भयो । सत्ता गठबन्धनको पाँच दल मध्ये चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नुवाकोटमा क्रियाशिल छ । गठबन्धन जिल्ला संयन्त्रको पहिलो बैठक १८ चैत, २०७९ मा नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय विदुरमा बसेको थियो । पहिलो बैठकमा जसपाबाहेकका तीन दल सहभागि थिए । दोश्रो बैठकबाट जसपा सहितको चार दलिय बैठक बस्न थालेको जिल्ला संयन्त्रको शुक्रवार १० बैशाख, २०७९ को बैठक भने दुई दलमा सिमित बन्न पुग्यो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रद्धारा मात्रै औपचारिक प्रेस विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेर अन्य दुई पार्टीहरू समाजवादी र जसपा अलग भएको संकेत गर्यो ।
शुक्रवार साँझ नै जनता समाजवादी पार्टी नुवाकोटले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर आफुहरू सत्ता गठबन्धनमा नरहेको र आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन एक्लै भिड्ने जानकारी दियो । जिल्ला अध्यक्ष ईश्वरकुमार राउतद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिए अनुसार जसपाको सम्मानजनक उपस्थिति नुवाकोटमा नहुने भएपछि बाहिरिएको हो । उनले सोही बिज्ञप्ती आफ्नो आधिकारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेर भनेका छन्– ‘कसैलाई हराएर कसैलाइ जिताउने नाउँमा जसपा नुवाकोट प्रयोग नहुने निर्णय गरियो । आजबाट अन्य राजनीतिक दलसित पनि सहमति र सहकार्य गर्न सकिने गरि ढोका खुल्ला गरिएको जानकारी गराउछौ ।’ यस सन्देश मार्फत् उनले एमालेसंग समेत जसपा तालमेल गर्न वा गठबन्धन गर्न नुवाकोटमा तयार रहेको संकेत गरेका छन् ।
बुधवारको चार दलिय संयन्त्रको बैठकमा भएको छलफल अनुसार समाजवादीलाई विदुर नगरपालिकामा ४ वटा वडा अध्यक्ष, बेलकोटगढीमा तीन वटा वडा अध्यक्ष र तारकेश्वरमा एउटा वडा अध्यक्ष दिने प्रस्ताव भएको थियो । हस्ताक्षर हुन बाँकी तर लिखित गरिएको उक्त निर्णय अनुसार जसपालाई बेलकोटगढीमा र तारकेश्वरमा एक÷एक वटा वडा अध्यक्ष दिने सहमती थियो । यहीबाट सुरु भएको अन्तरपार्टी कलह र आन्तरिक कलहको अन्तिम रुप नै शुक्रवार बसेको दुई दलको बैठक र जारी विज्ञप्ती रहेको संयन्त्रमा सहभागि दलका एक नेताले बताएका छन् ।
बुधवारको बैठकमा लगाइएको भागबण्डा अनुसार विदुर नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसलाई मेयर सहित वडा नंं. २, ३, ७, ८, १० र १३, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई उपमेयर सहित ५, ९ र १२, समाजवादीलाई वडा नं. १, ४, ६ र ११ वडा भाग लगाइएको थियो ।
त्यसै गरी तारकेश्वरमा काँग्रेसलाई अध्यक्ष सहित ३ वटा वडा अध्यक्ष, माओवादीलाई उपाध्यक्ष सहित एउटा वडा अध्यक्ष, समाजवादी र जसपालाई एक÷एक वटा वडा अध्यक्ष दिने सहमती भएको थियो । त्यसै गरी बेलकोटगढी नगरपालिकामा नेकपा माओवादीलाई मेयर सहित ४ वटा वडा, काँग्रेसलाई उपमेयर सहित ६ वटा वडा, समाजवादीलाई २ वटा वडा र जसपालाई एउटा वडा अध्यक्ष दिने प्रस्ताव थियो । विदुर नगरपालिकामा समाजवादीलाई वडा संख्या धेरै भएको भन्दै संयन्त्रको बैठकमा काँग्रेसले पुनः छलफल गर्न थालेपछि बुधवारको बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसैको निरन्तरताको क्रममा शुक्रवार बसेको बैठकले नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नुवाकोटका तीन पालिकाको विभाजन गरेको छ । विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकामा सिट भागबण्डा गरेको छ ।
विदुर नगरपालिकामा काँग्रेसलाई मेयर सहित ९ वटा वडा, माओवादीलाई उपमेयर सहित ३ वटा वडा र समाजवादीलाई एउटा वडा भाग लगाइएको छ । त्यस्तै बेलकोटगढी नगरपालिकामा माओवादीलाई मेयर सहित ५ वटा वडा, काँग्रेसलाई उपमेयर सहित ६ वटा वडा र समाजवादीलाई दुई वटा वडा भाग लगाइएको छ । तारकेश्वर गाउँपालिकामा काँग्रेसलाई अध्यक्ष सहित ४ वटा वडा, नेकपा माओवादीलाई उपाध्यक्ष सहित २ वटा वटा दिइएको छ ।
समाजवादीको नाममा भाग लगाइएको विदुर नगरपालिकाको एउटा वटा र बेलकोटगढी नगरपालिकाको दुई वटा वडा समेत काँग्रेस माओवादीले एक आपसमा भागबण्डा गरेर लिने सम्भावना छ । बेलकोटगढीमा दुई पार्टीले एक÷एक वटा वडा लिने र विदुरको एउटा वडा काँग्रेसले नै राख्ने सम्भावना देखिएको छ । आफुहरूको अनुपस्थितिमा अपमानजनक रुपमा बाँडफाँड गरिएको प्रति समाजवादी नुवाकोटका नेताहरूले असहमती जनाएका छन् । नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा निजी विचारका रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै सत्ता गठबन्धनमा आफुहरू नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, समाजवादी पार्टीले पनि शनिवार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा आपत्ति जनाएको छ । शुक्रवार सञ्जालको तर्फबाट विज्ञप्ती जारी गर्नेहरूमा नेपाली काँग्रेस नुवाकोट सभापति रमेशकुमार महत र नेकपा माओवादी केन्द्र नुवाकोट संयोजक पुष्प लामिछाने छन् ।
पछिल्लो सहमती अनुसार तीन पालिका विदुर, बेलकोटगढी र तारकेश्वरमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा प्रष्ट सहमती भएको छ । जस अनुसार वडा अध्यक्ष हुने दलले दूई वटा वडा सदस्य लिने र समाजवादीले गठबन्धनको तर्फबाट वडा अध्यक्ष स्विकार गरेमा त्यस वडामा काँग्रेस माओवादीको कम्तिमा एक÷एक जना वडा सदस्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
समाजवादी र जसपाले आफुहरूको सहयोग बिना नुवाकोटको तीन पालिकामा जितेर देखाउन समेत काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई चुनौती दिएका छन् । एमालेले जितेको स्थानीय तहमा अनिवार्य गठबन्धन गर्ने र एमालेलाई हराउने भन्दै भएको गबठन्धनै अपूर्ण रहेको तर्क साना दलहरूको छ ।
जसपा जिल्ला अध्यक्ष इश्वरकुमार राउतका अनुसार मतका आधारमा काँग्रेस–माओवादीले साना दललाई ‘साइजमा राख्ने’ भन्दै अपमान गर्नु घातक हुने छ । जसपाका जिल्ला उप सचिव उद्धब पनेरुले माओवादी र काँग्रेसलाई जितेर देखाउन खुल्ला चुनौती समेत दिएका छन् ।
देवी देवताको रुप : बैशाख पूर्णिमा मनाइने नेपालकै सबै भन्दा लामो रथ यात्रा र नुवाकोटको प्रशिद्ध ‘सिन्दुरे जात्रा’ को अवसरमा भैरबी मन्दिर नुवाकोटका धामी हरिमानसिंह डंगोल (जसलाई जिउँदो देवताको रुपमा पुजिन्छ) उनी आफ्नो धर्मपत्नीसंग जात्राको अवसरमा परम्परागत पोशाकमा । तस्बिरहरू : सुवास श्रेष्ठ
सिन्दूरे जात्राको क्रममा रथ बोक्दै युवाहरू । तस्बिर : सुवास श्रेष्ठ
विदुर । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंका स्थानहरूसँग मिल्दाजुल्दा नाम इन्द्रचोक, असन, नयाँबजार हुँदै देवीस्थान टोलसम्म बेग्लै रौनकताले त्यहाँको माहोल नै रंगीविरंगी बनाएको छ । म नुवाकोटको कुरा गर्दैछु, काठमाडौंको होइन । मानिस रमाइरहेका छन् । कतै बासुरीको धून त कतै विभिन्न मनोरञ्जनमय खेलहरू भइरहेका छन् ।
सबै आ–आफ्नै धूनमा सामान तथा खेलहरू हेर्दै रमाइरहेका छन् । मन प्रफुल्ल छ । बजार पूरै सजिएका छन् । जेरीको लहर, जसलाई हेर्दा जेरी जात्रा भन्दा फरक नपर्ने । जात्रामा बाजा बजाएर देवताका खटलाई घुमाउदै एकअर्कालाई सिन्दूर दल्ने, आपसमा सिन्दूर खेल्दै रमाइलो गर्ने भएकोले यसलाई सिन्दूरे यात्रा भनिन्छ । यसरी सांस्कृतिक नगरी नुवाकोट जात्रामय बनेको छ ।
केही वर्ष यता कोरोना भाइरस महामारीको कारण नुवाकोट मण्डला (दरबार क्षेत्र) मा उच्च महत्वको रूपमा हेरिने विभिन्न पर्वहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए । कयैन् मन्दिरहरूमा पूजापाठ रोकिएका थिए । सामूहिक भेला हुन निषेध गरिएकै कारण यो अवस्था सृजना भएको हो । नुवाकोट दरबार परिसरमा बर्सेनि आयोजना हुने शताब्दिऔं पुराना जात्राहरूमध्ये सिन्दूरे जात्रा पनि एक हो । यो नुवाकोटको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान हो । सिन्दूरे जात्रा अर्थात् देवी जात्रा नुवाकोटमा विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ । नेपालको इतिहासलाई पल्टाउने हो भने सात तले दरबारको दक्षिणतर्फ रहेको देवी भैरवीलाई देशको रक्षक मानिन्छ । नेपाल–चीन युद्ध हुँदा राजा रणबहादुर शाहले भैरवीको आराधना गरेका र दैवी शक्तिका कारण विजय प्राप्त गरेको भन्ने विश्वास छ । भैरवीको सिन्दूर यात्राको भव्यता अनुपम छ ।
हरेक चैत्रशुक्ल पूर्णिमाका दिन यो जात्रा धुमधाम साथ मनाइन्छ । यो यात्रा फागु पूर्णिमादेखि सुरू भएर महिना दिनसम्म चल्छ । यो जात्राको अवधिभर यसका पुजारीहरूले जहाँ पायो त्यहा खाँदैनन् । यो जात्रा चलिरहँदा नारायण जात्रा पनि धुमधामका साथ मनाइन्छ । यो जात्रा घोडे जात्राको दिन र त्यसको भोलिपल्ट गरेर दुई दिन चल्ने गर्छ । यसलाई मिनी सिन्दूरे जात्रा पनि भनिन्छ ।
सिन्दूरे यात्रालाई प्रत्येक वर्ष परम्परागत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि धामी (भैरवी मन्दिरका पुजारी) धमिनीका साथै द्वारे (सरकारका प्रतिनिधि), कुमार, गणेश, तथा गुठियारहरूको व्यवस्था हुँदै आएको छ । हालका धामी हरिमानसिंह डंगोलको बाह्रौं पुस्ताका धामी हुन् ।
चैत्रशुक्ल चतुदर्शी (२ गते) को दिन बेलु्का कुमारीको हातबाट लिएको धामीको स्नान कार्यसँगै जात्रा विधिपूर्वक सुरू हुन्छ । बन्दुक पड्केको विशेष साइतमा स्नान कार्य गरेपछि धामीलाई पोशाक पहिराइन्छ । सुनौला मुकुट, गहना, बाला, चाँदीको पेटी, डमरु पात्र, भोटो र जामा आदि भेषभूषामा धामी निकै आकर्षक देखिन्छन् । त्यसपछि धामी दौडेर द्वारेको घरमा पुग्ने गर्छन् । त्यहाँ गुभाजुले तान्त्रिक विधिमार्फत् धामीधमिनीमा भैरवभैरवी चढाउने कार्य गरिन्छ अनि गाजल लगाइन्छ ।
सो कार्य सम्पन्न भएपश्चात् बुढी भैरवी (देवी भैरवीको आमा) र भैरवी मन्दिरको पछाडि एक एक वटा लिङ्गो (४२ हात लामो) गाड्ने गरिन्छ । पहिले लिंगो गाड्ने काम स्थानीयबाट हुन्थ्यो । केही वर्षयता नेपाली सेनाले गाड्ने गरिएको छ । सामान्य बुद्धि लगाएर लिंगो गाड्न सकिँदैन । यो लिंगो वैशाख कृष्ण नवमी र दशमीका दिन क्रमशः ढालिन्छ ।
पूर्णिमाको दिन (४ गते) विशेष बाजागाजा साथ धामीधमिनी र गणहरूलाई तलेजु मन्दिरतर्फ लगिन्छ । त्यहाँ बज्राचार्य(गुचाजु)द्वारा आवश्यक पूजाआजा गर्ने कार्य सकिएपछि यो जात्रा भैरवी मन्दिरदेखि दक्षिण–पश्चिमपट्टि सूर्यमती र गण्डकीको संगमस्थल देवीघाट (जालपा मन्दिर) तर्फ प्रस्थान गर्दछन् ।
खटमा भैरवभैरवी र अष्टमातृकाका मूर्तिहरू राखिएको हुन्छ । बाटोमा पर्ने स्थानहरूमा रथको तथा जीवित देवताको रूपमा पुजिने धामीधमिनीको दर्शन तथा पूजा गर्न भक्तजनहरूको भीड लाग्छ । मध्यरातमा देवीघाट पुगेका धामीले करिब २४ घण्टाको बसाइँमा बिहान विशेष पूजाआजासहित जालपा मन्दिर परिसरमा जिउँदो पशुचौपाया तथा माछाको भोग खाएर नयाँ सालको देशमा हुने घटनाक्रमका भविष्यवाणी गरिन्छ ।
यो भविष्यवाणी सुन्ने अवसर गुभाजु, द्वारे, बाह्रभाइ खलक आदिलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । उल्लेखनीय वाणीलाई नेपाल सरकारका राष्ट्र प्रमुख समक्ष पु¥याइने प्रचलन रहेको द्वारे (महेन्द्रकुमार शाही) ले बताएका छन् ।
भैरबी मन्दिरबाट देविघाट स्थित जालपादेवी मन्दिर हिडेका धामीधमिनी । तस्बिर : सुवास श्रेष्ठ
देवीघाटको मेला सकिएपछि धामीधमिनी लगायत अन्य गणहरू बाजागाजासाथ रमाइलो यात्रा गर्दै नुवाकोट डाँडातर्फ लाग्छन् । देवीघाट, ठूलो बगैंचा, माझीटार, बट्टार हुँदै धरमपानी पुर्याइन्छ। बट्टारमाथि रहेको बाराही मन्दिर र धरमपानीको बीचमा विशेष जात्रा भोज ख्वाइन्छ र रथलाई धरमपानीमा सर्वसाधारणलाई पूजाआजाको लागि राखिन्छ । द्घितीयाको दिन (५ गते) धरमपानीमा जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थितिमा नेपाली सेना (जबर जंग गण) ले दुई सलामी (निशान झण्डा र भैरवी सलामी) बढाइँ दिइन्छ । यो यात्रा देवी भैरवी मन्दिर दक्षिणतर्फ रहेको महिषासुर मर्दिनी (दुर्गा) मन्दिरको अगाडि बज्राचार्यले विशेष पूजाआजा गरेपछि विजय उत्सवको रूपमा द्वारेले धामीलाई सिन्दूर र गाजल लगाइन्छ । जुन सिन्दूरे जात्राको रूप लिन्छ । किंवदन्ती अनुसार जालपा देवी (भैरवीको दिदी) आएको अवसरमा सिन्दूरे जात्रा गरी हर्ष बढाइँ गरिएको मानिन्छ ।
विशेष बाजामा नाच्दै रमाउँदै हातहातमा चिराग अर्थात् बत्ती लिएर नाइकेको अनुमतिमा खट(रथ) उचालेपछि यात्रा र गणहरू तुलजा भवानीतर्फ लम्कन्छ । तृतीयाको दिन भैरवी मन्दिर पछाडि राखिएको डबलीमा अष्टमातृकाको खट अगाडि धामीलाई सरकारी वकिलको तर्फबाट बिहान दुइटा रागोको बलि खाने प्रचलन रहेको छ । जुन हेर्दा पीडाबोध हुन्छ । देवता धारण गरेका धामीले राँगा, बोकाको रगत पिउन डरलाग्दो गरी झम्टन्छन् ।
वैशाख कृष्ण अष्टमीका दिन बाहिर खटमा रहेका देवीदेवताका मूर्तिहरूलाई मन्दिरमा बाह्रभाइ खलकीद्वारा पुनस्र्थापना गरिन्छ । नुवाकोटमा सञ्चालन हुने यो जात्रा नेपालकै लामो दिनसम्म चल्ने जात्राको रूपमा लिन सकिन्छ। यसको मुख्य आकर्षणको केन्द्र रथ यात्रा र जीवित भगवानको रूपमा पुजिने धामीधमिनी नै हुन् । जात्रामा बूढापाकाको सहभागिता घट्दै गए पनि युवाहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ । कला सांस्कृतिकमा उनीहरूको लगाव अत्यधिक देखिन्छ ।
हो, पनि नुवाकोटेहरू जात्रामै जीवन देख्छन् । यहाँका जात्रासँग किंवदन्ती र मिथक जोडिएको छ । यस्ता पर्वले समाजमा रहेको असमानतालाई पुरेर समानता प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्छ ।
स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई आकर्षित गर्छ ।
विदुर । रसुवामा निर्माण भइरहेको एक सय ११ मेगावट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले २०७९ मंसिरदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ ।
अहिले आयोजनाले कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ । आयोजनाको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनाका अनुसार अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फ उपकरण जडानको काम भइरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण देखाएर भारत फर्किएको गएको छठपछि निर्माणस्थलमा आएको थियो । त्यसयता टोलीले उपकरण जडानको कामलाई निरन्तरता दिएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणको जिम्मा पाएको भोइठ हाइड्रो इन्डियाले गएको छठदेखि काम सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले तोकिएको समयसीमा भित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाएर काम गरिरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका आयोजना प्रमुख सत्यराम ज्याख्वाले बताउनुभयो । आयोजनामा अहिले उपकरण जडान, सर्च ट्यांकमा कंक्रिट गर्ने तथा डिसेन्डरमा गेट राख्ने कार्य भइरहेको छ । आयोजनाका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकलको सम्पूर्ण सामग्री निर्माण स्थलमा आइसकेको छ ।
यसको २५ प्रतिशत काम सकिएको छ । सिभिलतर्फ ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनामा अहिले सिभिल कार्यमा २ सय र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यमा ६० जना भन्दा बढी खटिएका छन् । एक सय ११ मेगावट क्षमताको यो आयोजनाको २०७० माघदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको हो । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीपहिरोले आयोजनाको काममा अवरोध पु¥याउँदै आएको छ ।
रसुवा । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पदीय दुरूपयोग गरेको विषयमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी र समाचारहरू सार्वजनिक भैरहेकै छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्दा भ्रष्टाचारका तौरतरिकाहरू पनि भिन्न रूपमा गाउँगाउँमा पुगेको छ ।
रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा पनि भिन्न खालको भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ । रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका नेता नुर्ब‘ साङ्वोले गाउँपालिकाको बजेट दुरूपयोग गरेर हाइट्रोपावरमा सेयर हालेको पाइएको छ । अध्यक्ष नुर्प‘ले गाउँपालिकाको पैसाले हाइड्रोपावरका लागि सडक बनाइदिएको भन्दै नक्कली भुक्तानी गराएर हाइड्रोपावरमा लगानी गराएको भन्दै छानविन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ ।
चैत २९ गते परेको उजुरीमा अध्यक्ष नुर्ब‘ले हाइड्रोपावरसम्म जाने सडक गाउँपालिकाले बनाइदिएको भन्दै उनले हाइड्रोपावरको ड्यामसाइडदेखि पावरहाउससम्म बनाएको बाटोमा गाउँपालिकाले पैसा हालेर सडक बनाएको भन्दै हाइड्रोकै पैसाले बनाएको बाटो गाउँपालिकाको लगानी भएको भन्दै त्यस बापतिको पैसा सेयरमा कन्भर्ट गराएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
बेत्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका–१, थाङ्दोरमा निर्माण गरिरहेको १४.७ मेगावाटको फलाखु खोला हाइड्रोपावरको ड्याम साइटदेखि पावर हाउससम्म जाने सडक गाउँपालिकाले बनाएको भन्दै भुक्तानी लिएको कुरा अख्तियारमा दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । यार्सामा हेडवर्क्स रहने आयोजनाको घिचेतमा पावर हाउस रहेको छ ।
अध्यक्ष नुर्बुमाथि मानव बेचविखनको पनि आरोप लागेको छ । नेपाली कांग्रेस रसुवाका एक जना नेताले दिएको जानकारी अनुसार नुर्ब‘ २०६३ सालमा भारतमा कोठी सञ्चालन गरिरहेको आरोपमा काठमाडौँबाट पक्राउ समेत परेका थिए । नुर्ब‘ले भारतमा कोठी सञ्चालन गर्दा नुवाकोटकै अर्का एक जनप्रतिनिधिको साथ लिएको ती नेताले जानकारी दिए ।
नुर्बुले अदालतमा आफ्नो कानुनी हिसाबकिताब मिलाए छन् भने उनीसँगै काम गरेका यार्साका दुइ जना अहिले पनि मुद्दा खेपीरहेका छन् । राजनीतिक संरक्षण लिन जान्ने नुर्बुले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न खासै केही काम गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले बताए । –दैनिकीबाट
विदुर । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मङ्गलबारदेखि सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु गरेको छ ।
‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ वैशाख ६ देखि जेठ १९ गतेसम्म ७७ जिल्लाका तीन लाख घरपरिवारमा सो गणना गरिने विभागले जनाएको छ । नुवाकोटका जिल्ला कृषिगणना अधिकृत नरेन्द्र शर्मा भट्टका अनुसार गणनाका लागि २२ जना सुपरिवेक्षक र ८६ जना गणक खट्ने छ । जिल्लाका १२ स्थानीय तहका दुईसय २१ गणना क्षेत्रहरूबाट करिब पाँचहजार ५२५ कृषक परिवारको छनौट गरी गणना गरिने उनले जानकारी दिनु भयो ।
नमुना कृषि गणनाको क्रममा गणक, सुपरीवेक्षक र जिल्ला कृषि गणनाका कर्मचारी गणनामा कृषक परिवार सूचिकरण, कृषक परिवार प्रश्नावली र वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली गरी तीन किसिमको लागत राखिने छ । प्रश्नावली १३ भागमा विभाजन गरी दुई दर्जन प्रश्न समेटेर प्रश्नावली बनाइएको छ ।
कृषिगणनाबाट कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हुने जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिन, जमिनमा प्रयोग भइरहेको मलदेखि विषादीसम्मको विवरण समेट्ने गरी प्रश्नावली बनाइएको छ ।
देशभर ५ हजार २३ जना गणक कृषिगणनाका लागि खटिने छन् । उनीहरूको सहजीकरणका लागि १ हजार २ सय ८० जना सुपरिवेक्षकहरू खटिने भएका छन् । नेपालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा कृषि गणना गरिएको थियो । त्यसयता हरेक १०÷१० वर्षमा यस्तो गणना हुँदै आएको छ ।
२०६८ को कृषि गणनाअनुसार एक लाख १६ हजारसँग आफ्नै जमिन छैन भने ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रहेको उल्लेख छन् । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाएका छैनन् ।
वि.सं. २०१८ देखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक प्रत्येक १०÷१० वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनोट गरिएका कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलापसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने विभागले जनाएको छ । यस गणनाअन्तर्गत पारिवारिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका कृषिकार्यको विवरण सङ्कलन गरिनेछन् ।
त्यस्तै बीउबिजन, विषादी, मलखादको प्रयोग, उमेर समूह, जातअनुसारको पाल्तु पशुपन्छीको संख्या, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने भवन र संरचनाको अवस्था, कृषि औजार, माछापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, पुष्प खेती, रेशमपालन, कृषि ऋण, कृषि बीमा, कृषि अनुदान, कृषिमा वातावरणको प्रभावका बारेमा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । खाद्यान्नको पर्याप्तता र परिवारको अन्य आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि कामदार, महिलाको नाममा रहेको जग्गालगायतका बारेमा पनि विवरण सङ्कलन गरिने छ ।
यस पटकको कृषि गणनामा घरपरिवारले सञ्चालन गरेको र समुदायमा आधारित कृषि कार्यका लागि अतिरिक्त सरकारी, अर्धसरकारी, सहकारी र संस्थागत रूपले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक कृषि कार्यको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने विभागले जनाएको छ ।
कृषि गणनामा खटिएका सुपरिवेक्षकले सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिकाको मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यसँग समन्वय गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यहाँका प्रतिनिधिसँग गणनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । विगतका कृषि गणनाको अनुभवबाट सम्बन्धित पालिकाको पदाधिकारीले अनुरोध गरेको अवस्थामा कृषकले सहयोग गर्ने र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न सजिलो हुने भएकाले प्रतिनिधिसँग समन्वय तथा छलफल गर्न विभागले सुपरिवेक्षकलाई निर्देशन दिएको छ ।
विदुर । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ७१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तह निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको छ ।
यो निर्देशिकाले स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा कानुनको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कसुर तथा सजायको व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ५ मा निर्वाचनमा प्रभाव पारेमा हुने सजायबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । कसैले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने सम्बन्धी कसुर गरेमा कसुरअनुसारको सजाय र सजाय गर्ने अधिकारी समेत तोकिएको छ ।
ऐनको दफा २० को उपदफा (२) विपरीत निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी, अनुगमनकर्ता वा सुरक्षाकर्मी वा आयोगले खटाएको पर्यवेक्षक वा सञ्चारकर्मी वा कुनै संस्थाले निर्वाचनको कुनै काम गर्दा कानून बमोजिम कुनै उम्मेदवारले आफ्नो मत दिने बाहेक निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै किसिमको काम गरे वा गराएमा पनि सोही सजाय हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
ऐनको दफा २१ विपरीत उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरे बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दिएमा वा दिन मञ्जुर गरेमा पनि दण्ड सजायको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक भोज आयोजना गरेमा र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गरेमा र सार्वजनिक भोजमा सहभागी भएमा पनि दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुरमा अदालतले पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
विदुर । नुवाकोटमा भिरबाट लडेर एक जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ ।
बेलकोटगढी नगरपालिका–१२ का २६ वर्षीय योगेन्द्र न्यौपानेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उनी सोही वडाको घट्टे फोगडा भिरबाट अन्दाजी एक सय मिटर तल खसेर उनको ज्यान गएको बताइएको छ ।
म्यादी प्रहरीमा छनौट भई तालीममा सहभागी हुन आउदा भिरबाट खसेर न्यौपानेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । परिवारले खोज्दा राति उनको शव फेला पारेको हो ।
स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिसंग अन्तरक्रिया गर्दै पञ्चकन्या–१ का नागरिकहरू । तस्बिर : सुजित भण्डारी
पञ्चकन्या । २०७२ सालमा साविकका शिवपुरी, थानापती, चौघडा र सुर्यमती गाविसमा ‘विपन्नताबाट मुक्तिका लागि स्वावलम्बन’ मार्फत नुवाकोट जिल्लाको विकासमा साझेदारी गर्न प्रवेश गरेको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र (आरएसडिसी)ले तत्कालिन समयमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ आँपचौरमा २५५ घरधुरीको पुनःनिर्माणमा सहजिकरण गरेको थियो ।
बिनाशकारी भुकम्पले क्षक्षीग्रस्त भएका नागरिकहरूको निजी आबास पुनःनिर्माणसँगै गाँउपालिकाकै आग्रहमा पुनः बिकासमा साझेदारी गर्न सुरु गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई भूकम्प प्रभावित समुदायको प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि परियोजना भनिएको छ । स्वावलम्बन विधी पद्धती अनुसार यस कार्यक्रमलाई लागू गरी परियोजनाको उद्देश्य हासिल गर्ने केन्द्रको सोच छ । यस कार्यक्रमलाई लागू गर्न माल्टेजर इन्टरनेशल र बिएमजेटबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ ।
५ वटा वडा रहेको पञ्चकन्या गाँउपालिकामा सबै वडाहरूमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष जनसहभागितामा संस्थाले बिविध ४ क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । बिनाशकारी भुकम्पका कारण क्षती भएको घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न पछि उनीहरूको जिबिकोपार्जनमा सुधार ल्याउन आरएसडिसीले बिबिध ४ क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । जसमा संस्थागत बिकास, जिबिकोपार्जन, खानेपानी तथा सरसफाई र प्रकोप जोखिम न्युनिकरणको बिधामा काम गर्दै आएको छ । सिञ्चाई कुलो निर्माण, उच्च स्थानमा पोखरी निर्माण, तरकारी खेतीको लागी टनेल सहयोग, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण लगायतको कामलाई आरएसडिसीले महत्वपुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस संस्थाले जर्मन सरकार मालटेजर ईन्टरनेसनलको आर्थिक सहयोगमा जनसमुदायको मागमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको हो । पञ्चकन्या गाँउपालिकाको वडा नम्बर १ को झण्डै २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा अहिले तरबुजा खेती सुरु भएको छ । केही समय अगाढीसम्म सामान्य रुपमा १÷२ झाल तरबुजा रोप्नेहरू अहिले १०÷१२ रोपनीमा खेतीनै गर्न थालेका छन् । अरु खेती भन्दा तरबुजाको खेतीले राम्रो आम्दानी दिने देखेपछि यो खेतीमा आकर्षित भएको पञ्चकन्या गाँउपालिका वडा नम्बर १ का मोहन लामिछाने बताउछन् ।
ठुलो क्षेत्रफलमा तरबुजाको खेती सुरुवात भएकाले पहिलो बर्ष बजारिकरणमा समस्या हुन सक्ने तर्फ समेत उनीहरू सचेत छन् । स्थानीय तह र ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रले अहिलेबाटनै बजारको ब्यबस्थापन तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नको लागी उनले सुझाब दिएका छन् ।
पञ्चकन्या गाँउपालिका वडा नम्बर १ कै राक्सेखोला हुँदै आँपचौर पुग्ने सिञ्चाईकुलो लामो समय देखि बन्द थियो । सिञ्चाईकुलो बन्द भएपछि आपचौरका नागरिकहरूले खेत बाँझै राख्ने गरेका थिए । तर अहिले ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रको सहयोगमा यही सिञ्चाई कुलोको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । राक्क्षेश्वरी खोलाबाट आपचौरसम्म अहिले कुलोमा पानी बग्ने गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको र जनसहभागितामै सञ्चालनमा आएको कुलोले त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई ब्यस्त बनाउन थालेको छ । खेतको सिरानबाट कुलो बग्न थालेपछि तरकारी खेती तथा नगदेबाली लगाउन थालिएको छ । बाँझै रहेको खेतबाट उब्जाउ भएपछि घरमा हरियो तरकारी खान पाएसंगै बिक्रिबाट सामान्य खर्च समेत पुग्न थालेको छ । घरको नुन तेल अहिले यहि सिञ्चाई कुलो मर्मत सम्भार जोहो गर्न सजिलो भएको नबराज राईले बताएका छन् ।
यो सिञ्चाई कुलोले अहिले झण्डै २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा सिञ्चाई हुने गरेको छ । सिञ्चाईसँगै बस्तुभाउलाई खुवाउने पानीका लागि समेत सजिलो भएको छ । पञ्चकन्या गाउँपालिकामा आरएसडिसीले गरेको सिञ्चाईको काम यो प्रतिनिधिमुलक मात्रै हो । पञ्चकन्या गाँउपालिका क्षेत्रमा १० वटा सिञ्चाई कुलोको मर्मत सम्भार सम्पन्न भएको छ । संस्थाले राखेको रकम बराबर नै किसानहरूको जनसहभागिता रहेको छ । किसानहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा जनश्रमदान सहित मर्मत सम्भार सम्पन्न भएको सिञ्चाई कुलोले धेरैको जनजीवन फेरिदिएको छ ग्रामिण बिकास तथा स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रका फिल्ड संयोजक साधुराम सापकोटा बताउछन् ।
ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रले मर्मत सम्भारमा सहयोग गर्न‘ अघि पञ्चकन्या गाँउपालिका वडा नम्बर ५ को ठुलो खोला हुँदै छब्बिसे जाने सिञ्चाई कुलोमा पानी त के कुरा मान्छे हिढ्न समेत समस्या थियो । बिहानै कुलोमा पानी लिन हिडेका ब्यक्ति साँझसम्म नआईपुग्दा खोज्न जानु पर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले मुहानबाट लगाएको पानी मान्छे भन्दा छिटो खेतमा आईपुग्ने गरेको छ । कुलो मर्मत गर्दा असजिलो स्थानमा पाईप राखिएको, मेसेनरी वाल लगाएका कारण मुलो मजबुत भएको किसान साहिला बरामले बताए ।
पञ्चकन्या गाँउपालिकाको ५ वटै वडामा न्युन आय भएका किसानहरूको लागी उद्यमशिलता तालिम समेत सञ्चालन गरेको छ । ब्यबसायिक रुपमा उत्पादन तथा बजारिकरणको लागी सुरुमा उद्यमशिलता तालिम सञ्चालन गरि उनीहरूलाई ब्यबसायिक बनाउन समेत संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ । कुखुरा पालन, टनेल खेती, सिलाई बुनाई र संस्थागत बिकास तर्फ संस्था केन्द्रित रहेको छ । केही किसानहरूलाई कुखुरा पालनका लागी भाँडाकँुडा समेत उपलब्ध गराएको छ । तालिम, ज्ञान सिप र दक्षतासँगै आबाश्यक औजार समेत सहयोग भएपछि कुखुरा पालनको सुरु समेत भएको छ ।
यस अघिका विभिन्न काम र परियोजनाबाट मनग्य आर्थिक उपार्जन गरेको पञ्चकन्या गाउँपालिका नागरिकहरूलाई ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्र प्रायःका घरको राम्रो कमाई गर्ने परिवारको सदस्य जस्तै बनेको छ । पञ्चकन्या गाँउपालिकामा पछिल्लो समय सञ्चालन गरेको परियोजनामा झण्डै २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी समुदायमा खर्चेको ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्र नुवाकोटका कार्यक्रम संयोजक धिरेन्द्र कुमार आरसीले जानकारी दिए ।
पञ्चकन्या गाँउपालिका वडा नम्बर ३ का रामबहादुर मिजारको जीवन अहिले फेरिएको छ । सामान्य रुपमा घरमा खेती किसानी गर्दै आएका उनलाई संस्थाले टनेल प्लाष्टिक सहयोग गरेको छ । अघिल्लो बर्षबाटनै उहाँले टनेलमा गोलभेडा लगाउन थालेका थिए । पहिलो बर्षनै टनेल मार्फत उनले २३ हजार रुपैयाँ कमाउन सफल भएसँगै फेरि टनेलमा गोलभेडा लगाएका छन् । संस्थाले टनेल सहयोग नगरेको भए अहिले ब्यबसायिक रुपमा खेती गर्ने तर्फ कल्पना समेत गर्न नसक्ने उनी बताउछन् । तर अब उनको सोच निक्कै फराकिलो बनेको छ । रामबहादुर मिजारले गोलभेडाबाट भएको आम्दानीले बाख्रा किनेर पाल्ने योजना बनाएका छन् ।
उनी जस्तै उर्जा भरिएको अर्का किसान हुन् पञ्चकन्या गाँउपालिका वडा नम्बर ३ मानथोकका नबराज पण्डित । उनलाई ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रले १ थान प्लाष्टिकको पोखरी सहयोग गरेको छ । ब्यबसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने सोच बनाउदै आएका उनलाई १ थान प्लाष्टिकको पोखरीले उर्जानै बेग्लै थपिदियो । अहिले उनले झण्डै ४ रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेतीलाई बिस्तार गरेका छन् । तरकारी खेतीको सिरानमा पोखरी निर्माण गरेर आबाश्यक्ताको आधारमा सिञ्चाईको ब्यबस्थापन पोखरी मार्फत भएको छ ।
ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रले पञ्चकन्यामा नयाँ ब्यवसायीको उत्पादनसँगै नयाँ कृषि उपजको समेत सुरुवात गरेको छ । महङ्गो मानिने सिताके च्याउको बिस्तार समेत परियोजनाले गर्दै आएको छ । पञ्चकन्या गाँउपालिकाको वडा नम्बर ४ का हरिकृष्ण खनालले अहिले सिताके च्याउ काठमा रोपेका छन् । स्थानीय ६ जना मिलेर अर्मपर्म नै गरी ६ नै जनाले च्याउ खेतीको सुरुवात गरेका हुन् । थोरै स्थानबाट धेरै उत्पादन दिने र मनग्य आम्दानी हुने भएपछि यसरी उनीहरू यस तर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
यसरी पञ्चकन्या गाँउपालिकाको सर्बाङ्गिण बिकासका लागी ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रले काम गर्दै आएको छ । न्युन आय भएका नागरिकहरूलाई समुहमा राखेर घुम्ती कोषको रकम परिचालन, ब्यवसायी उत्पादनमा यस संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ । समुह निर्माणसँगै समुहमा रहनेहरूको ब्यक्तिगत तथा नेतृत्व बिकासका लागि समेत संस्थाले काम गर्दै आएको ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रका निमित्त कार्यकारी प्रमुख शिबप्रसाद बस्यालको भनाई रहेको छ ।
उसो त स्थानीय सरकार अर्थात् पञ्चकन्या गाँउपालिकाले पनि संस्थागत सहकार्यमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । पञ्चकन्या गाँउपालिकामा यस संस्थालाई भित्र्याउने देखि कार्यक्रम निर्माण र सञ्चालनसम्ममा गाँउपालिका आफै अग्रसर भएको पञ्चकन्या गाँउपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ बताउछन् ।
ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रले पञ्चकन्या गाँउपालिका बेसार खेती, अकबरे खुसार्नी लगायतमा पनि नमुनाको रुपमा सुरुवात गर्न थालेको छ । बाँदर लाग्ने स्थानमा यस्ता खेती प्रभाबकारी हुने भएपछि बेसार र खुसार्नीको लागी भर्खरै मात्र काम सुरु भएको छ । ग्रामिण स्वाबलम्बन बिकास केन्द्रको सुरुवाती यो काममा पनि यहाँका नागरिकहरू खुसी देखिएका छन् । नागरिकहरूको दुःखमा साँझेदारी गर्न आर्यपुगेको आरएसडिसिको कामबाट सबै लाभाम्बित भएका छन् ।
संस्थागत बिकाससँगै, आधुनिक कृषि प्रणालीको बिकास, स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यक्रम लगायतमा गाँउपालिकासँग साँझेदारी गर्दै आएको पञ्चकन्या गाँउपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष मणिनाथ लामिछानेले बताए ।
गाँउपालिकाको ३ हजार घरधुरीलाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको ग्रामिण बिकास तथा स्वबलम्बन बिकास केन्द्रको कार्यक्रममा अहिले प्रत्यक्ष रुपमा ७१ वटा स्वाबलम्बन समुह निर्माण गरि १७ सय ५० जना लाभान्वित भएका छन् ।